AutoCAD ကိုရှာဖွေပါ ငါက Mac ပါ
OS X El Capitan နှင့် AutoCAD ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းပေးပါ
Jordi Gimenez | | OS X ကိုအယ်လ် Capitan, Mac အတွက်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများ
OS X El Capitan စတင်လည်ပတ်ပြီးနောက်နာရီပိုင်းအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြစ်နိုင်သည့်အကြောင်းသတိပေးစာတစောင်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည် အချို့ကိရိယာများသို့မဟုတ်အသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်ပြနာများ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှုနှင့်အသစ်က Apple software ကိုအတူ။ ဆောင်းပါး၏မှတ်ချက်များတွင်ပြCနာကို AutoCAD နှင့်မမျှော်လင့်ဘဲပိတ်ထားခြင်းများကိုမှတ်ချက်ပေးသောအသုံးပြုသူများစွာရှိခဲ့သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုပြproblemsနာများကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုလေ့လာကြမည်။ အသုံးပြုသူ၏လှူဒါန်းမှုကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် froy gallegos မှတ်ချက်များအတွက် AutoCAD beta ကို download link ကိုမျှဝေသူ။
ဒီကနေဒီ beta version ကို download လုပ်ပါ.
AUTODESK မှတရားဝင် update ကိုနောက်ဆုံးမထုတ်ပြန်မှီတိုင်အောင် "ဤသည်သည် patch" ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်၎င်းသည်၎င်းတို့အားသူတို့၏ရပ်ရွာလူထုမှပေးသောတစ်ခုတည်းသောအလားအလာရှိသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပြီးမမျှော်လင့်သောပိတ်ခြင်း၏ပြtheနာသည် ၎င်းကိရိယာသည် OS X El Capitan နှင့်မကိုက်ညီပါ။ beta version ကိုရယူရန်အတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည်၊ ၎င်းသည်ကြာမြင့်စွာမလိုအပ်ပါ။ AutoCAD နှင့်အခြားပြproblemsနာများမမျှော်လင့်ဘဲပိတ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ BootCamp ကို အသုံးပြု၍ အခန်းကန့်ကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အသစ်သောဗားရှင်းဖြင့် patch ကိုတပ်ဆင်ရန်နှင့်အလုပ်လုပ်ရန် ပို၍ လွယ်ကူကြောင်းထင်ရှားသည်။
အားနည်းချက်ကတော့အနည်းဆုံးပြောရမယ် 2016 ရဲ့ AutoCAD XNUMX ရဲ့ preview ကိုကြည့်ရအောင် Mac အတွက်ဖြစ်သော်လည်းယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်ပြofနာပိုဖြစ်သည်။ ဤအချိန်တွင် Apple သည် OS X ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ WiFi ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ခြင်း (သို့) နှေးကွေးခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ပြhavingနာကြီးကြီးမားမားမရှိပါ။ သို့သော်အချို့ဗားရှင်းအသုံးချပရိုဂရမ်များသို့မဟုတ်ကိရိယာများသည် ၄ ​​င်းတို့ကိုကောင်းစွာမစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac OS X ကို » OS X ကိုအယ်လ် Capitan » OS X El Capitan နှင့် AutoCAD ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းပေးပါ
Alfredo DC ဟုသူကပြောသည်
သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကို serial number ပေးရင်ကောင်းမှာပဲ။ Autodesk စာမျက်နှာမှာရှာလို့မရဘူး
Alfredo DC သို့စာပြန်ပါ
ငါ patch ကို install လုပ်ပါပြီငါ activation အတွက်ထိုနံပါတ်ရိုက်ထည့်ကြောင့်ငါ့ကို activate ခွင့်ပြုမထားဘူး
ငါ Yosemite ကို Capitan တိုးမြှင့်လိုက်ပြီး autocad 2015 ဖိုင်များကိုငါဖွင့်လို့မရဘူး။ ငါဘာလုပ်ရမလဲ။
2016 autocad ကို install လုပ်ပါသလား။ သို့မဟုတ်လက်ရှိ Yosemite သို့ပြန်သွားရန်နည်းလမ်းရှိပါသလား၊ ကျွန်ုပ်လက်ရှိ autocad 2015 ကိုမဖျက်ဘဲနှင့်?
Hi Silvia၊ ကျွန်တော့်အတွက်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်လုပ်ခဲ့တာလို့ပြောပါရစေ။ Autodesk စာမျက်နှာမှာမှတ်ပုံတင်ထားတယ်၊ autocad 2015 ကို uninstall လုပ်ပြီး beta ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။ autocad alpha / beta and It and download it autocad alpha page မှာဖော်ပြထားတဲ့ serial နံပါတ်တွေကိုသုံးပါ။ ငါ့အဘို့ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်လုပ်ခဲ့🙂
ဟေ့ ငါ့ကို "ထုတ်ကုန်သော့" ပေးဖို့တစ်စုံတစ် ဦး က။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Sharon Calderon အားပြန်ပြောပါ
အပြည့်အဝဗားရှင်းထွက်လာသည့်အခါနှင့်ဤဗားရှင်းကပ္ပတိန် 10.11.1 တွင်အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်ရန်အက်ကွဲပြီးသားရှိလျှင်မည်သူမဆိုသိလား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကုန်ပစ္စည်း၏သော့သည် ၇၇၇ ဟ777ဖြစ်ပြီး Serial နံပါတ်မှာ ၅၅၈-၆၁၃၇၆၆၂၀ ဖြစ်သည်
Jesus Rafael Jimènez Arreola ဟုသူကပြောသည်
မေးခွန်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ ဤ beta ဗားရှင်းတွင်ကျွန်ုပ်သည် AutoCad 2015 အက်ကွဲခြင်းကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
Jesùs Rafael Jimènez Arreola ကိုပြန်ပြောပါ
စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအား ၁ လကြာစမ်းသပ်ခြင်းသည်ဤ beta သည်မည်မျှကြာသည်ကိုဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်တွင်ရပ်ဆိုင်းမည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်မလိုအပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်ကပ္ပတိန် ၁၀.၁၁.၁ autocad 1 ရှိလျှင်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မစဉ်းစားပါ၊ ဗားရှင်းသက်တမ်းကုန်သွားပြီ၊ ယခု ၂၀၁၆ (သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်အတွက်ဖြစ်သည်) ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အခမဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန် ၆ ရက်ကျန်ရှိသည်။ / ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုများစွာစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ ယခုတွင် autocad ကို enable လုပ်ရန်ပိုမိုခက်ခဲလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာသူတို့သည်လိုင်စင်များကိုရောင်းချခြင်းမပြုသော်လည်းအချိန်များအတွက် subscriptions မပေးခဲ့ကြပါ။ 🙁
Mac အတွက် windows partition ကို install လုပ်တယ်။ Autocad ကို windows partition မှာရှိသလား။
မင်္ဂလာပါ၊ လက်ရှိ Cap Cap ကိုပိတ်ပစ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးကိုယူပြီး၊ El Capitan ၏လက်ရှိဗားရှင်းကြောင့်ပြproblemsနာများမရှိတော့ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အခြားသူတစ် ဦး ဦး နှင့်လည်းဖြစ်ပျက်လျှင်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိူင်ရန်အခြားပြproblemနာတစ်ခုထပ်ထည့်သည်။
ဒါက PDF တင်ပို့မှုပါ။ ငါ pdf ကို CAD မှတင်ပို့ပြီးရင်ငါဖွင့်လိုက်ရင် pdf ကလိုင်းတော်တော်များများကိုမတွေ့ဘူးလို့ပြောသည်။ သို့သော်မည်သို့ပင်ဆိုစေ pdf ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ခြင်းအစားငါ SPACE ကိုနှိပ်လျှင်၎င်းသည်ကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်းကိုမှန်ကန်စွာတွေ့ရပြီးပုံနှိပ်သည့်အချိန်တွင်ပင်တွေ့ရသည်။ ဒီ bug က file ကိုငါကြိုက်တာလားဒါမှမဟုတ်ပုံမနှိပ်ခင်မှာချက်ချင်းမစစ်ဆေးနိူင်တဲ့အတွက်ငါအရမ်းအပူတပြင်းရှိတယ်။
ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဘယ်သူ့ကိုသိတာလဲ ငါ Adobe Reader နဲ့စမ်းကြည့်လိုက်ရင်ထပ်တူအမှားထပ်လုပ်မိတယ်။
၂၀၁၁ 13gb 2011GHz Intel Core i8 မှ Macbook Pro 2,7 have ကျွန်ုပ်တွင်ရှိသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ဒီပြproblemနာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဘယ်သူမှမသိဘူး ငါမဆိုတုံ့ပြန်မှုတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မည်သူမဆို ctb 2015 ကို autocad သို့မည်သို့တင်ရမည်ကိုသိပါသလား၊ ကျွန်ုပ်တွင် ၂၀၁၃ ရှိခဲ့သော်လည်း၎င်းကိုမွမ်းမံသောအခါတွင်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။
Autocad 14 သည်တစ်ညလုံးအလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါသလားသို့မဟုတ်ပြန်လည်တပ်ဆင်သင့်ပါသလား။
OS X El Capitan တွင် Microsoft က Outlook ပြproblemsနာများအတွက် patch ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်